တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဆိုင်ရာအင်္ဂါဂြိုဟ် - ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အရေးပါပုံ ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 14/06/2021 09:42 | နက္ခတ္တဗေဒ
တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအင်္ဂါဂြိုဟ် ၎င်းသည်အသိဉာဏ်ရှိသောရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်းဖြစ်ပြီးအဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာအင်္ဂါဂြိုဟ်ကိုပျံသန်းရန်ဖြစ်သည်။ အလေးချိန် ၁.၈ ကီလိုဂရမ်သာအလေးချိန်ရှိပြီးပေါ့ပါးပြီးသယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူစေသည်။ သို့သော်၎င်းမှာကြီးမားသောအခြေအနေများရှိပြီးစကြာ ၀ ofာ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွင်ကြီးမားသောတိုးတက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
ဤဆောင်းပါးတွင် Ingenuity Mars ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၊ လုပ်ဆောင်ပုံနှင့်အရေးပါမှုအားလုံးကိုသင့်အားပြောပြလိမ့်မည်။
အခြားဂြိုဟ်တစ်ခုသို့သွားရန်ရည်ရွယ်သည့်ရဟတ်ယာဉ်၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုကြည့်ကြပါစို့။ Ingenuity Marte သည်အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးအတွက်တော်လှန်ရေးဖြစ်စေသည့်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုတင်ပြသည်။ ဒါဟာကန့်သတ်နယ်ပယ်နှင့်အတူစွမ်းရည်အသစ်အတည်ပြုရန်ရှာသောစီမံကိန်းအပေါ်အခြေခံခဲ့သည်။ အထူးပြုလုပ်ထားသောကာဗွန်ဖိုင်ဘာဓါးသွား ၄ ခုပါ ၀ င်သော rotors နှစ်ခုပေါ်တွင်လမ်းညွှန်မှုပေးသည် အမြန်နှုန်း 2.400 rpm ၏ပတ်ပတ်လည်ဆန့်ကျင်ဘက်။ ဤအမြန်နှုန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိခရီးသည်တင်ရဟတ်ယာဉ်ထက်အဆများစွာပိုမြန်သည်။
၎င်းတွင်ဆန်းသစ်သောဆိုလာဆဲလ်များ၊ အရည်အသွေးမြင့်ဘက်ထရီများနှင့်အခြားပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်သည်။ သူကတည်းကသိပ္ပံနည်းကျတူရိယာအမျိုးအစားကိုသယ်ဆောင်မထားဘူး အင်္ဂါဂြိုဟ် 2020 ကို Perseverance ၏သီးခြားစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခြားဂြိုဟ်ပေါ်တွင်လေယာဉ်အားထိန်းချုပ်ရန်ပထမဆုံးကြိုးစားသောလေယာဉ်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Ingenuity Mars ရဟတ်ယာဉ်သည်သမိုင်းတစ်လျှောက်အခြားဂြိုဟ်ကိုပေါက်ကွဲစေမည့်ပထမဆုံးကြိုးပမ်းမှုဖြစ်သည်။
အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်မှရဟတ်ယာဉ်များပျံသန်းရန်အခက်အခဲဖြစ်စေသည့်အရာမှာ၎င်း၏ပါးလွှာသောလေထုဖြစ်သည်။ ဒီဟာအလုံအလောက်ဓာတ်လှေကားရဖို့စေသည်။ ထို့အပြင်အင်္ဂါဂြိုဟ်၏လေထုသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ထက် ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်အလင်းဖြစ်ရန်လိုသည်၊ ၎င်းသည်ပိုမိုကြီးမားသော rotor ဖြင့်လိုက်ပါကာ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိဤမော်ဒယ်၏ရဟတ်ယာဉ်အတွက်လိုအပ်သည့်အရာထက်ပိုမိုလျင်မြန်စွာလည်ပတ်နိုင်သည်။
ငါသည်လည်းကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိအပူချိန်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အချို့သောဒေသများရှိအပူချိန်များအတွက်လွန်စွာအသုံးများသည် လေယာဉ်ဆင်းသက်မှုသည်အနည်းဆုံး ၁၃၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိသည်။ Ingenuity Mars အဖွဲ့သည်ဤကဲ့သို့သောအပူချိန်များကိုအတည်ပြုသော်လည်း၎င်းသည်ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းကောင်းစွာလုပ်ဆောင်သင့်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ အအေးသည်ဤရဟတ်ယာဉ်၏အစိတ်အပိုင်းများစွာ၏ဒီဇိုင်းကန့်သတ်ချက်များကိုတွန်းအားပေးလိမ့်မည်။
JPL လေယာဉ်ထိန်းချုပ်မှုသည်ရဟတ်ယာဉ်ကို Joystick ဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆက်သွယ်ရေးနှောင့်နှေးခြင်းသည်ဂြိုဟ်တုအကွာအဝေးကို ဖြတ်၍ အာကာသယာဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှာစာများကြိုတင်တင်ထားရမည်။ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည်လေယာဉ်ပျံတစ်ခုပြီးတိုင်းကြာရှည်စွာအာကာသယာဉ်မှပြန်လည်ပေးရမည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Ingenuity သည် waypoint တစ်ခုသို့မည်သို့ ပျံသန်း၍ နွေးထွေးစွာနေရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်များစွာရှိသည်။
Ingenuity Mars သည်အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာကိုပြသခဲ့သည်။ အင်ဂျင်နီယာများကဤအလွန်ပါးလွှာသောလေထုထဲတွင်အလုံအလောက်ဓာတ်လှေကားထုတ်လုပ်နိုင်သည့်အလားတူပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှင်သန်နိုင်စွမ်းရှိသည့်ပေါ့ပါးသောလေယာဉ်တစ်စင်းတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သူတို့သည် JPL ရှိအာကာသ Simulator တွင်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောမော်ဒယ်များကိုစမ်းသပ်လိမ့်မည်။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးအနေဖြင့်ရရှိမည့်ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ရေတွက်လိမ့်မည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ဒီကိရိယာ၏အောင်မြင်မှုတစ်ခုစီကိုဂုဏ်ပြုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ပြီးတော့ Cape Canaveral မှလွှတ်တင်လိုက်ရုံနဲ့ဒီဂြိုဟ်ပေါ်ရှိအင်္ဂါဂြိုဟ်ကိုဆင်းသက်ဖို့အတွက်သာခရီးသွားခြင်းသည်အောင်မြင်ခြင်းပါပဲ။ သင်အနီရောင်ဂြိုလ်သို့ရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အလွန်အမင်းအေးသော Martian ညများ၌နွေးထွေးစွာနေရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုလာပြားတစ်ခု၏တည်ရှိမှုကြောင့်၎င်း၏အားသာချက်ကိုအလိုအလျောက်အားသွင်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ ရဟတ်ယာဉ်သည်ပထမဆုံးပျံသန်းမှုမှအောင်မြင်လျှင်နောက်ထပ်စမ်းသပ်ပျံသန်းမှုများကိုအတွင်း၌ကြိုးစားလိမ့်မည် ကမ္ဘာမြေ ၃၁ နှင့်ညီမျှသော Martian ရက်ပေါင်း ၃၀ ခန့်ပြတင်းပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည်.
အကယ်၍ ဤရည်မှန်းချက်အောင်မြင်လျှင်၊ အနီရောင်ဂြိုဟ်အားအနာဂတ်ရှာဖွေရေးတွင်ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသောဝေဟင်အတိုင်းအတာပါဝင်နိုင်သည် လေထုထဲတွင်ပျံသန်းရန်လိုအပ်သောနည်းပညာကိုတည်ဆောက်နိုင်ကြောင်းပြသရန်ရည်ရွယ်သည်။ အောင်မြင်လျှင်၎င်းသည်အနာဂတ်စက်ရုပ်နှင့်လူသားအင်္ဂါဂြိုဟ်မစ်ရှင်များတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည့်အခြားအဆင့်မြင့်စက်ရုပ်ပျံယာဉ်များကိုတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။ ယနေ့ခေတ်မြင့်မားသောပတ်လမ်းများမှမပေးသောထူးခြားသည့်အချက်ကိုလည်းသူတို့ကပေးနိုင်သည်။
ဤနည်းပညာအမျိုးအစားကိုတီထွင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူ့ခိုးယူမှုများအတွက်မြင့်မားသောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့်အသိအမှတ်ပြုမှုများကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး rovers များရောက်ရှိရန်ခက်ခဲသောမြေအနေအထားကိုရောက်ရှိစေသည်။ အားလုံးအသင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင် Ingenuity ကိုစမ်းသပ်ရန်သူအကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့သည်။ ဤအရာအားလုံး၏အရေးပါမှုသည်အကောင်းဆုံးသောဆုလာဘ်ဖြစ်လာစေရန်နှင့်အနာဂတ်တွင်အခြားကမ္ဘာကြီးကိုကျွန်ုပ်တို့စူးစမ်းလေ့လာသည့်နည်းလမ်းအတွက်အခြားရှုထောင့်တစ်ခုကိုလက်ခံနိုင်စေရန်အတွက်တစ်ချိန်လုံးသင်ယူရန်ဖြစ်သည်။
Ingenuity Mars သည် Jezero crater ဟုခေါ်သောဆင်းသက်မည်။ ၄၅ ကီလိုမီတာကျယ်သောအပေါက်တစ်ခုသည် Isidis Planitia အနောက်ဘက်စွန်းရှိအနီရောင်ဂြိုလ်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ Martian အီကွေတာ၏မြောက်ဘက်တွင်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုအင်တုံ။ ဝေးလံသောအတိတ်ကာလ၌ဤမီးတောင်သည်အိုအေစစ်ဖြစ်နိုင်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၃ ဘီလီယံမှ ၄ ဘီလီယံအကြားတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတာဟိုးရေကန်အရွယ်အစားရှိရေအိုင်ထဲသို့စီးဝင်ကာကာဗွန်နိတ်နှင့်ရွှံ့တွင်းထွက်သတ္တုများဖြင့်ပြည့်နေသောအနည်အနှစ်များကိုထုတ်လွှတ်သည်။ Perseverance သိပ္ပံအဖွဲ့မှယုံကြည်သည်မှာဤမြစ် ၀ ကျွန်းပေါ်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသသည်အော်ဂဲနစ်မော်လီကျူးများနှင့်အခြားပိုးမွှားများအသက်တာ၏နိမိတ်လက္ခဏာများကိုစုဆောင်းထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်သည်။
အင်္ဂါဂြိုဟ်၏ပါးလွှာသောလေထုထဲတွင်ဓာတ်လှေကားအလုံအလောက်ထုတ်ပေးနိုင်သည့်ပေါ့ပါးသည့်စက်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန် JPL အင်ဂျင်နီယာများကသေးငယ်သောဆင့်ကဲဆင့်ကဲခြေလှမ်းများဖြင့်ငါးနှစ်ကျော်ကြာသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာမြေ၏ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်းရှင်သန်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးရှေ့ပြေးပုံစံသည် JPL space simulator တွင်ရာနှင့်ချီသောပိုမိုအဆင့်မြင့်သောမော်ဒယ်များကိုစမ်းသပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤအဆင့်များထဲမှတစ်ခုခုမအောင်မြင်ပါက၊.
ဒီအချက်အလက်တွေနဲ့အတူသွင်ပြင်လက္ခဏာအင်္ဂါဂြိုဟ်၊ စကြ ၀ ofာဆိုင်ရာဗဟုသုတအတွက်၎င်းရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများနဲ့အရေးပါမှုအကြောင်းသင်ပိုမိုလေ့လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » နက္ခတ္တဗေဒ » တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအင်္ဂါဂြိုဟ်